बिदाईको बेला बेहुलीलाई रुनै आएन भनेपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
June 29, 2021 AdminLeaveaComment on बिदाईको बेला बेहुलीलाई रुनै आएन भनेपछि ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
छोरिले आफ्नो घर छोडेर परायाको घर जाने प्रचलन परापुर्व कालदेखिनै चलायमान प्रथा हो जसलाई बिवाह नामकरण गरियो र जुन तपाईं हाम्रो घर गाउमा चलिनेरहेको छ । छोरी मान्छे भएपछि अरुको घर जानैपर्ने अवधारणा सहित यो अनन्तकालसम्म निरन्तर रहने र सो रहेमात्रै भावि पुस्ताहरुले आफ्नो ठाउँ पाउने कुरो सत्य हो ।
सामाजिक संजालमा हामिले चेलिले आफ्नो घर छोडेर सो घरलाई माइति बनाउदैगर्दा बिदाईको बेला धेरै चेलिहरु भावुक भएको नै पाउछौ । किन मन नदुखोस् जुन घर आफ्नोे थियो अब त्यो माइति भयो ,मान्छे उहीँ छन् तर सम्बन्ध फरक भयो । त्यस्तै कुनै बेहुलि भने बिदाईको बेला नाच्दै ,गाउदै ,रमाउदै गएको पनि हामीले सामाजिक संजालमै देखेका छौ ।
तर आजको यो भिडियो सामाग्री अलि भिन्न छ । बेहुलिको बिदाई हुँदै गर्दा परम्परागत सबै बेहुलि अक्सर रुने गर्छन् तर यी बेहुलिले आफुलाई रुनै नआएको भन्दै ठट्टा गरेपछि एकदमै हासोको माहोल बनेको थियो । जिवनभर सगै रहेर जिन्दगी बेथित गर्नुपर्ने छ फेरि आँसु झार्नु पो किनर । नवबिवाहित जोडिलाई हार्दिक बधाई तथा सुखद दाम्पत्य जिवनको शुभकामना ।
हेर्नुस् भिडियो यहाँबाटः